Wararka Caalamka | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News | Page 2
Home facebook.com Wararka Caalamka Page 2
Golaha Wakiilada Itoobiya oo kulan degdeg ah isugu yimid ayaa waxay ansixiyeen bayaanka aasaaska guddida wada tashiga ee heer Qaran, ee uu dhawaan soo gudbiyay Ra'iisal wasaare Abiyi Axmed. Guddidan ayaa waxay ka shaqayn doonaan sidii loo qaban lahaa kulan wadatashi oo ay isugu imaan doonaan qawmiyadaha wada dega dalka...
UK ayaa sheegtay in ay aad uga walaacsan tahay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, iyadoo sheegtay in ay marayso meel xasaasi ah. Safiirka UK, ee Soomaaliya, ayaa sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in madaxda Soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku soo gebagebeeyaan hannaanka doorashada si loo xaqiijiyo kalsoonida natiijada...
Dowladda Mareykanka ayaa taageertay baaqii ku saabsanaa shirka tooska ah ee Golaha Wadatashiga Qaran ee todobaadkan diirada lagu saarayo hagaajinta iyo dardar gelinta hanaanka doorashada Soomaaliya. Maraykanka ayaa sheegay in ay lama huraan tahay in madaxda heer qaran iyo heer federaal ee Soomaaliya ay si degdeg ah u soo gebagebeeyaan...
AUN Sheekh Maxamed Xasan Imaamkii Masjidka Magaalada Columbus oo Meydkiisa La Helay Maalmo La Weysanaa Kadib.
Sheikh Maxamed Xassan Aadam oo ahaa Imaamka Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Maraykanka, oo la weysanaa illaa arbacadii lasoo dhaafay ayaa ugu dambayn maydkiisa la helay. Xubno kamid ah qoyskiisa iyo jaaliyadda Soomaaliyeed Ohio ayaa sheegay in Imaamka la waayay 7-dii fiidnimo ee xilliga geeska...
Afhayeenka kooxda TPLF Getachew Reda ayaa dowladda Itoobiya ku eedeeyay inay weeraro ku qaadeen qaybo kamid ah gobolka Tigray, isagoo xusay in laga soo weeraray saddex aag oo ay ku sugnaayeen kooxda TPLF. Eedayntan ayaa kusoo hagaagtay xilli maalmo ka hor ay TPLF sheegtay inay ka baxayso dhammaan dhulkii ay...
Hoggaamiyaha kooxda TPLF ayaa ciidamadiisa ku amray inay si degdeg ah uga soo baxaan degaannada Axmaarada iyo Canfarta, kuna soo laabtaan degaankooda, isagoo ku tilmaamay inay arrintani tahay tallaabo loo qaaday dhanka wada hadal iyo xabbad joojinta. Hoggaamiyaha ayaa sidoo kale sheegay in arrintani ay u gogol xaarayso wada hadal...
Safiirka Cusub ee Soomaaliya Mareykanku usoo Magacaabey oo Aqalka Senate ku Meel Mariyey.
Senetka Mareykanka ayaa meel mariyay in Larry Edward Andre, Jr, oo ah xubin sare oo ka tirsan Adeegga Arrimaha Dibadda, uu noqdo Safiirka Mareykanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Larry Edward Andre, Jr ayaa safiir ka soo noqday Mauritania iyo Jabuuti. Waxa uu markii ugu dambeysay si ku meel gaar ah...
Gobolka Welo ee Amxaarada oo Milateriga Ethiopia Sheegeen in ay Gebi’aanba la wareegeen Tgrayna Laga Saarey.
Sida ay baahisay Warbaahinta ku hadasha afka dowladda, Ciidamada Militariga Itoobiya ayaa la wareegay gacan ku haynta guud ahaan gobolka waqooyiga Wallo ee degaanka Axmaarada, oo ay ku jirto magaalada muhiimka ah ee Woldiya. Goobahan cusub ee ay maanta la wareegeen ciidamada Itoobiya, ayaa waxaa horey gacanta ugu hayay kooxda...